Tsidiho ny British Museum | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny British Museum
Eoropa dia manana tranombakoka vitsivitsy izay tena zava-dehibe amin'ny lanjan'ireo fanangonana azy ireo, ary iray amin'izany ny British Museum na British Museum. Ity tranombakoka ao Londres Mahafinaritra satria mitazona harena sarobidy tokoa.
I mean, ny hareny dia avy amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao ka raha mandeha mitsangatsangana any amin'ny renivohitra anglisy ianao dia hevitra tsara dia tsara ny mitsidika sy mihaona amin'izy ireo. Avelanay eto daholo izay ilainao ho fantatra amboary ny fitsidihana.
1 Ny British Museum
2 Tsidiho ny British Museum
Ny British Museum
Niorina tamin'ny 1753 izy io ary mitana ny lohatenin'ny maha tranombakoka voalohany ho an'ny daholobe misy fidirana maimaim-poana. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nitsidika olona manodidina ny dimy arivo isan-taona izy ary ankehitriny dia tombanana ho manan-katao enina tapitrisa izy.
Ny tranombakoka Teraka tamin'ny fanentanana sy fahalianan'i Sir Hans Sloane, mpanangom-bokatra lehibe miaraka amina zavatra maherin'ny 70 izay tsy tiany ho very taorian'ny fahafatesany. Ka dia natolony ho an'ny Mpanjaka George II tamin'ny 20 1753 pounds ny fanangonana azy rehetra. Nanaiky ny mpanjaka ary nanjary ara-dalàna ny fototry ny tranombakoka tamin'ny XNUMX. Fa inona ny zavatra mandrafitra ity fanangonana manokana ity? Sora-tanana, boky, fahagola, fanontana, medaly, vola madinika, sarisary, santionany voajanahary ...
vao tamin'ny 1759 dia nanokatra ny varavarany ny tranombakoka. Tany Montagu Residence no nanatanterahany izany voalohany, trano taonjato faha-XNUMX any Bloomsbury. Tamin'izany fotoana izany dia maimaim-poana ny fidirana ary tsy nanidy ny varavarany mihitsy izy io, na dia nandritra ireo ady lehibe roa aza. Eny tokoa, io fanangonana voalohany io dia nitatra be tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny vanim-potoana imperial par tsara indrindra.
Ny fisian'ny imperialisma ny Fanjakana Mitambatra ao Afrika, Amerika ary Azia dia nahazo harena tena izy. Na dia naneho ny faniriany hamerina ireo harena nalainy ireo aza ireo firenena niavian'izy ireo dia tsy misy fandrosoana amin'izany. Anisan'izany ny harena vahiny izay tazomin'ny tranombakoka Vato Rosetta (vato mamela ny famaritana ny hieroglyphs), sary sokitra kilasika ary Sary sokitra Parthenon.
Ny fanangonana voajanahary ny tranombakoka dia nifindra tany amin'ny foibeny any South Kesington tamin'ny faran'ny 80 ary lasa Museum of Natural History. Raha ny taonjato faha-XNUMX dia taonjato nanitarana ny fanangonana, ny taonjato faha-XNUMX dia ny serivisy natolotry ny tranombakoka. Namboarina ny fandaharam-pianarana, naverina tamin'ny laoniny ny efitrano ary anaovana fampirantiana maharitra toy ny Fanoharana: Discovery, tontolon'ny taonjato faha-XNUMX.
Ya tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanohy nanitatra ireo zava-tsarobidiny ny tranombakoka miaraka amin'ny seramika sinoa, famantaranandro isan-karazany ary fasan'ny fiangonana, ny an'i Nebamun, razambe egyptiana.
Ho an'ny tranombakoka afaka mankany ianao amin'ny alàlan'ny metro, bus na bisikileta. Ny tobim-piantsonana akaiky indrindra dia Holborn, Tottenham Court Road, Goodge Street ary Russell Square. Ireo bisy mijanona eo amin'ny New Oxford Street dia 1, 8, 19, 25, 38, 55, 98 ary 242. Ireo mijanona avaratry ny Tottenham Court Road sy atsimon'ny Gower Street dia 14, 24, 29, 73, 134 ary 390 Ireo mijanona ao Southampton Row dia 59, 68, X68, 91, 168 ary 188.
Raha nanofa bisikileta ianao dia misy lalan-bisikileta ao anatin'ny vavahadin'ny tranombakoka ao amin'ny Great Russell Street. Ny gara akaiky indrindra dia eo ivelan'ny vavahady, eo amin'ny zoron'ny Great Russell Street sy Montague Street.
Misokatra mandritra ny taona ny tranombakoka fa mikatona ny 1 sy 24, 25 ary 26 janoary. Misokatra isan'andro ny tranombakoka manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary manakaiky indrindra amin'ny 8 ora sy sasany hariva ny zoma. Manomboka mihidy izy ireo manomboka amin'ny 30:5 hariva ary manomboka amin'ny 20:8 alina ny zoma. Misokatra amin'ny andro fialantsasatra fa tadidio fa voafetra ny fitsangatsanganana sy ny lahateny.
Ny Fitsarana Lehibe, miaraka amin'ny latabatra fampahalalana, dia misokatra isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6 hariva ary hatramin'ny 8:30 alina amin'ny Zoma. Misokatra ny boaty boaty manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary hatramin'ny 7:45 hariva, ny Zoma. Araka ny ho hitanao amin'ny zoma dia mitatra ny ora.
Ary inona no azo tsidihina? Manana departemanta samihafa ny tranombakoka: Africa, Oceania and America, Egypt and Sudan, Asia, Coins and medals, Greece and Rome, Middle East, Prehistory and Europe, Prints and Drawings. Raha tsy dia manana fahalalana betsaka ianao ary ny hianaranao dia ny tsara indrindra dia ny misoratra anarana ho an'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Ireo fitsangantsanganana ireo dia natao ho an'ny vondrona olona 25 farafaharatsiny.
ny Fitsangatsanganana maraina manokana, ka nantsoina hoe, manomboka amin'ny 9 maraina izy ireo ary maharitra adiny iray, ao anatin'izany ny fotoana fakana sary. Mametraha amin'ny Internet fotsiny dia mankanesa eo amin'ny vavahady lehibe amin'ny Great Russell Street amin'ny 8:50 maraina miaraka amin'ny fanamafisana ny famandrihana anao. Ireto fitsangatsanganana ireto dia momba ny British Museum ny tenany, na momba azy Egypty taloha na momba Shina. Sarany ny tapakila £ 30 isaky ny olon-dehibe ary ny ankizy eo anelanelan'ny 5 sy 15 taona dia mitentina 15 kilao.
Endrik'anarana amin'ny teny frantsay alamino ny fitsidihanao Io dia amin'ny fotoana kasainao ho ao anatin'ny tranombakoka: Iray, telo ora? Amin'ny adiny iray monja dia tsy hahita be ianao fa mbola azo atao ny mahita ny Rosetta Stone, ny asyrianina asyrianina ary ny sary sokitra an'ny Parthenon, ny Harena Oxus, ny Lalao Royal of Ur, la Katebet mummy, iray fiadiana samurai, ny Mpanjakan'i Ife, ny legy chess set. Ny zava-drehetra amin'ny tany ambany, ny rihana ambony ary ny rihana ambany.
Amin'ny adiny telo dia mihatsara ny fitsidihana ary afaka manampy zavatra maro ianao: iray Sarivongana Easter Island, astrolabe an'i Sloane, sarivongana keramika Tang, Bust of Ramses the Grande, maodely automata, bibilava turquoise, vazy sinoa na a takelaka fanoratana cuneiform izay miresaka momba ny tondra-drano, ohatra.
Azonao atao ihany koa hijery ny tantaran'ny olombelona amin'ny zavatra 100 voafantina manokana, la Tantaran'i Londres amin'ny zavatra 20 na ny fahasamihafan'ny olombelona mandritra ny tantara. Ary raha te hilalao ianao fa tsy mahita ny British Museum fotsiny dia manome anao an'io fotoana tsara io. Azo atao ny mitazona zavatra mozea sasany miaraka amin'ny fanampian'ny mpilatsaka an-tsitrapo afaka mamaly ireo fanontanianao ianao.
Ity mety hita dia ao amin'ny Galerie fahazavana (efitrano 1), Fanangonana an'izao tontolo izao (efitrano 2), Galerie Living & Dying (efitrano 24), Roman Britain Gallery (efitrano 49), Votoatiny vola (efitrano 68), The Gallery World Islam (efitrano 42-43) ary China & Asia South Gallery (efitrano 33). Maimaimpoana foana izany.
Farany, torohevitra hatrany ny hitsidika ny tranokalan'ny tranombakoka satria any ianao no hanana vaovao farany, indrindra momba ny fampirantiana vonjimaika. Izao, ohatra, eo anelanelan'ny 11 aprily sy 21 jolay dia misy ny momba an'i Edvard Munch ary ny 23 Mey ka hatramin'ny 26 Aogositra dia misy iray hafa momba ny manga, ilay tantara an-tsary japoney malaza. Ho an'ny roa dia azonao atao ny manoratra amin'ny Internet.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Tsidiho ny British Museum
Inona no ho hita any Brittany frantsay
Valan-javaboary Arribe del Duero